JAAMACADDA CAMMUUD OO 725 ARDAY AY KA QALINJEBIYEEN | Maalmahanews
JAAMACADDA CAMMUUD OO 725 ARDAY AY KA QALINJEBIYEEN
Maalimahanews.com:- Arday tiradoodu ay gaareyso 725 ayaa maanta ka qalinjebisay Jaamicadda Cammuud ee magaalada Boorama.
112 ka mid ah ardaydan ka qalin jebisay Cammuud ayaa qaadanaya shahaadada heerka labaad.
Jaamacadda Cammuud ee magaalada Boorama oo waxbarashada Jaamacadeed laga billaabay 13-kii bishii Agosto ee sanadkii 1997 ayaa haatan jirsatay labaatan sano.
Guddoomiyaha Jaamacadda Bare sare, Saleemaan Axmed Guuleed ayaa BBC-da u sheegay in jaamacadaasi ay markii hore ku aasaaseen arday gaareysa 65 oo keliya iyo labo kulliyadood oo kala ah; kulliyadda waxbarashada ee macallimiinta iyo kulliyadda maareynta ganacsiga.
Guuleed ayaa muddo dheer hormuud ka ahaa kulliyaddii waxbarashada Lafoole ee Afgooye, wuxuuna laf dhabar u ahaa aasaasiddii jaamacadda Cammuud.
Sida uu sheegay Bare-sare Saleemaan Axmed Guuleed, Jaamacadda Cammuud ee Boorama waxaa hadda dhigta arday ka badan 4,500.
Jaamacadda ayaa waxa ay sidoo kale hadda ka kooban tahay 14 kulliyadood oo ay ka mid yihiin; kulliyadaha caafimaadka, injineerinka, Koombiyuutarka, beeraha, ganacsiga, dhaqaalaha, iyo kuwo kale oo ay ka qalinjebiyeen kumannaan arday ah labaatankii sano ee la soo dhaafay.
Weriyaha BBC-da Axmed Saciid Cige oo marar badan booqday xarunta Jaamacadda Cammuud ayaa wuxuu ku soo waramayaa in isbadal weyn uu ka muuqdo Jaamacadda oo xataa dhismayaasha iyo qalabka halkaasi yaala uu aad u korayay sanadba sanadka ka danbeeya.
Munaasabadda maanta ee qalinjebinta Jaamicadda Cammuud oo ku soo beegantay dabbaaldegga sanad-guuradii 20aad ayaa waxaa ka qayb gelaya madaxweyne ku xigeenka Somaliland, Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Zaylici, siyaasiyiin mucaarid iyo muxaafidba leh, bareyaal sare, macallimiin iyo arday oo qaarkood ka kala yimaadeen magaalooyinka Somaliland qaarkood.